Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa u ogolaanaya baararka iyo naadiyada habeenkii inay dib u | KWIT
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa u ogolaanaya baararka iyo naadiyada habeenkii inay dib u
By Halima Osman • Sep 15, 2020
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa u ogolaanaya baararka iyo naadiyada habeenkii inay dib u furmaan berri (Arbaco) afarta ka mid ah lixda degmo ee ay ku xirnaayeen sababo la xiriira heerarka coronavirus oo aad u sareeya.
Baararka ku yaal gobollada Polk, Linn, Black Hawk iyo Dallas ayaa dib loo furi karaa 5:00 galabnimo berri (Arbaco). Baararka ku jira Degmooyinka Story iyo Johnson-guryaha Jaamacada Gobolka Iowa iyo Jaamacadda Iowa-waa inay xirnaadaan ilaa hada.
Toddobaadyadii la soo dhaafey, Task Force ee Aqalka Cad ee Coronavirus wuxuu kugula taliyey in Iowa ay xiraan baararka inta badan gobolka Iowa ee 99ka degmo.
Saraakiisha Iowa iyo guud ahaan dalka ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in viruska uu ku faafayo baararka dadku ku badan yihiin. Afhayeen u hadlay waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa ayaa sheegay in gobolka uusan helin warbixin ku saabsan howl wadeenada Aqalka Cad todobaadkan.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Iowa waxay ku dhawaaqeen darsin kale oo u dhintey COVID-19 iyo in ka badan 500 oo kiis oo cusub oo la xaqiijiyey 24 saacadood ah. Waxaa ku dhintey guud ahaan 1,233.
Shan gobol oo Iowa ah ayaa lahaa 14-maalmood celcelis ahaan celcelis ahaan waxqabad ka sarreeya 15%. Iyo afar ka mid ah shanta ugu sarreysa waxay ku taal waqooyi-galbeed Iowa; Sioux, Lyon, Plymouth, iyo O'Brien Degmooyinka. Degmada Sioux ayaa leh heerka ugu sarreeya ee waxtarka oo ah 24%.
Badhasaabka ayaa amar ku bixiyay in iskuulada K-12 ay helaan ka-dhaafitaan gobol oo u ogolaanaya barashada khadka tooska ah, gobolka ay ku yaalliin waa inuu lahaadaa celcelis 14-maalmood coronavirus ah ugu yaraan 15 boqolkiiba, degmooyinkuna waa inay lahaadaan 10% maqnaansho .
Heerka waxtarka ee Degmada Woodbury waa 13 boqolkiiba.
Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu ka warbixiyay 43 kiis oo cusub oo ka dhacay Degmada Woodbury hal maalin gudaheed wadar ahaan kudhowaad 4,600 oo kiis oo ah coronavirus ilaa bilowgii cudurka faafa.
Waxaa jira hal kiis oo kale oo wanaagsan oo ah COVID-19 degmada Dakota, Nebraska illaa 2080 dhammaantood iyo 43 dhimasho.